ဆေးဝါး intermediate, ဆေးဝါး Intermediate - Kanwinn
Galla chinensis တရုတ်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ gallnut ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း gallnut ဆိုးဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးဆေး gallic acid ကိုမှ hydrolyzed ဖြစ်ပါတယ်။ gallic acid ကိုအများအပြားဆေးဝါးအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စတင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
gallnut များ၏ရောင်စဉ်မွှားလှုပ်ရှားမှုအစွမ်းရှိ၏။ gallnut ၏ Decoction အများအပြားမျိုးကွဲအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော inhibitory သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ယင်း၏မွှားအကျိုးသက်ရောက်မှု tanning အားဖြင့်အလွယ်တကူပရိုတိန်းမိုးရွာသွန်းမှုနှင့်ခဲစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေမွှားအစိတ်အပိုင်းများ၏အဓိကဖြန့်ဖြူးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
antioxidant ACTIVITY အား
အဆိုပါ Ortho-ဖင်နိုလစ်ဟိုက်ဒအုပ်စုတစ်စု superoxide အခမဲ့အစွန်းရောက် scavenging အတွက်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သိသိသာသာ Anti-အိုမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းအများအားဖြင့် gallnut ရှိ။ gallic acid နှင့် propyl gallate ကျယ်ပြန့်အစားအသောက်နှင့်အခြားဓာတုထုတ်ကုန် antioxidants အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
အသုံးပြုရန် WIDE အလားအလာများ
Gallnut နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ ပို. ပို. ခေတ်မီသောအစားအစာ, ဆေးဝါး, အလှကုန်နှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
GALLIC ACID နညျးပညာ
TANNIC ACID အစားအစာ grade
ရှန်ဟိုင်း Kanwinn Pharmchem, Ltd. အဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော gallic acid ကိုနှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျအဖြစ်ဆေးဝါး intermediate ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုအတွက်စေ့စပ်, 2002 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာဓာတု, ဆေးဝါး, ဒဏ်ငွေဓာတု, အထည်အလိပ်နှင့်ဆေးဆိုးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလယ်အလတ်ပေးအထူးပြုတစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ကြသည်။ ရှန်ဟိုင်း kanwinn Pharmchem, Ltd. Roche Group မှမှ 2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ၏အဓိကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ထုတ်ကုန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ၏နှစ်ပတ်လည်အရောင်းနှင့်တကွ, ဂျပန်၌ကောင်းစွာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဥရောပရောင်းချကြသည်။ ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမည်!
Adress: NO.99, FENGPU Avenue, FENGXIAN ခရိုင်, ဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းက
E-mail ကို: kanwinn@yeah.net
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-67108237
တို့က 4% enramycin ၏အစားထိုးအပေါ်လေ့လာမှု ...
123-Trimethoxybenzene , 2.3.4-Trimethoxybenzaldehyde , Pyrogallic အက်ဆစ် , ဆေးဝါး intermediate , 123-Trimethoxybenzene , Gallachinensisp.E ,